Fanaovana kolikoly :: Tratra ilay Sinoa mpivarotra entana sandoka - ewa.mg
Fanaovana kolikoly :: Tratra ilay Sinoa mpivarotra entana sandoka
News - Fanaovana kolikoly :: Tratra ilay Sinoa mpivarotra entana sandoka
Raha tsy ny atidoha dia isan’ireo mpanambaka ny mpanjifa amin’ny fivarotana an’irony vata fahitalavitra miaraka amin’ny marika tsy tena avy any am-potony irony ity lehilahy sinoa, manodidina ny efapolo taona. Nikasa hanao kolikoly momba an’ireo entana anjatony tapitrisa ariary no nahatrarana azy. Naiditra amponja vonjimaika eny Antanimora, afak’omaly, ity teratany vahiny ity.
Mahatonga vata fahitalavitra eto Madagasikara ilay Sinoa. Ireo mpivarotra an-tsisin-dalana, toy ny eny amin’ny Petite Vitesse, no fantatra fa tena mpanjifany. Arakaraka ny kaomandin’ ireo mpivarotra ireo no hametahana ny taratasy miraikitra izay misy ny mariky ny vata fahitalavitra. Saika ireo marika malaza no apetaka amin’ireo fitaovana ireo ary mazava ho azy fa latsaka be ny vidiny saingy tsy misy ny antoka amin’ny fahatsarana sy ny fahatezan’ny vokatra.
Tamin’ny herinandro lasa iny no naharenesan’ny minisiteran’ny Varotra ny fisian’ny fanafarana vata fahitalavitra nataon’io Sinoa io. Nampanantsoina izy. Nampitain’ny loharanombaovao akaiky ny raharaha fa manodidina ny 500 tapitrisa ariary ny teti-bidin’ ireo entana efa nohafarana.
« Niezaka nandamindresaka ka nikasa hanome vola an’ireo mpiasan’ny minisitera namotopototra azy io Sinoa io. Nampandre anay, nanoloana izany, ny teo anivon’ny minisitera. Nametrahana polisy nanao fanamiana sivily teny an-toerana niandry ny mety ho fihetsika sy resaka hataony. Tratra nanolotra vola 480 000 ariary ilay Sinoa ka nosamborina avy hatrany », hoy ny polisy eny Analakely izay nanao ny famotorana.
Voalaza fa mbola nanamby vola ny polisy nanao ny famotorana taminy indray izy. Io fanaovana kolikoly io no nanenjehana an’ity teratany vahiny ity. Nentina teny amin’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly na ny PAC ny raharaha, afak’omaly.
Toy ny gadra rehetra
Mitovy amin’ny fepetra ampiharina amin’ny voafonja rehetra no iainan’ireny teratany vahiny mamita sazy na voatazona am-ponja vonjimaika ireny, araka ny nambaran’ny tompon’ andraikitra iray eo anivon’ny fandraharahana ny fonja. Manefa ny saziny hatramin’ny farany izy ireo saingy misy kosa ireo afindra na averina any amin’ny firenena niaviany, arakaraka ny fifanarahana ataon’ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana vahiny raha misy ny fangatahana famindrana an’ireo teratany vahiny voasazy mankany amin’ny fireneny.
L’article Fanaovana kolikoly :: Tratra ilay Sinoa mpivarotra entana sandoka est apparu en premier sur AoRaha.
Kitra – « Major league soccer » : tafakatra amin’ny fihodinana faharoa ry Metanire
Nahazo ny tapakila hiakarany amin’ny dingana mana­raka eo amin’ny fifaninanam-pirenena amerikanina, taranja baolina kitra, na ny “Major league soccer” (MLS), i Romain Metanire sy ny Minnesota United Football Club. Ny ady sahala, 2 no ho 2, nifanaovany tamin’ny Colorado Rapids, teo amin’ny andro fahatelo, ho an’ny sokajy D, no nahatafita azy ireo. Fihaonana notanterahina, omaly alakamisy 23 jolay, tao amin’ny kianja ESPN Wide world of sports complex. Nitazona ny laharana faharoa ny Minnesota United FC, taorian’ity vokatra ity, ary ma­nana isa 5 rehefa nahavita ady sahala roa sy fandresena iray. Raha tsiahivina, nandresy ny Sporting Kansas City, tamin’ ny isa 2 no ho 1, teo amin’ny andro voalohany, natao ny 13 jolay, ary nisaraka 0 no ho 0 tamin’ny Real Salt Lake, ny 18 jolay, ary 2 no ho 2, tamin’ny Colorado Rapids, teo amin’ny lalao farany. Nitana ny laharana voalohany ho an’ity vondrona D ity ny Sporting Kansas City, ma­nana isa 6. Nihintsana, araka izany, ny Real Salt Lake, nahazo isa 4, sy ny Colorado Rapids, isa 1. Hidona amin’ny Columbus Crew SC, voalohany tao amin’ ny sokajy E, ry Metanire, eo amin’ny fihodinana faharoa. Lalao hotanterahina ny ala­robia 29 jolay ho avy izao ka hanafika any Colombus ry zalahy, amin’izany. Ho mafy ny lalao miandry ny Minne­sota United, amin’ity, satria ekipa andrarezina ary hilalao eo amin’ny kianja mahazatra azy izy ireo. Tsiahivina fa anisan’ireo mpilalao arahin’ireo teknisianina maro any Ame­rika, amin’izao fotoana izao, i Romain Metanire, noho ny tanjany sy ny fahaizany.TompondakaL’article Kitra – « Major league soccer » : tafakatra amin’ny fihodinana faharoa ry Metanire a été récupéré chez Newsmada.
Lomano-MNS Valisoa: olona 6 hampianariny maimaim-poana
Raiki-tampisaka ao amin-dRasoanjanahary Valisoaniaina ny fitiavana milomano ka tiany hampitaina amin’ny mpiara-belona aminy. Araka izany, hanomboka hisokatra amin’ny volana oktobra izao ny fampianarany ny taranja lomano. Hisy ny fisarihana ataony ka olona enina hahazo ny fampianarana maimaim-poana, fisarihana hatao ny faran’ny volana izao. Raha ny fantatra, efa 30 taona izao ny niangalian’ity Maitre Nageur Sauveteur (MNS) ity ny taranja lomano ary lehibe tao amin’ny klioban’ny Cosbani izy. Nambaran’i Valisoa fa nankatoavin’ny Ministeran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena ary ny Akademia Nasionaly ny Spaoro, ny maha Maitre Nageur azy.Marihina fa misokatra ho an’ny rehetra ny fampianarana. Fitaovana manaraka ny fivoarana sy ny fenitra iraisam-pirenena ny hampiasaina ary harahi-maso tsara avokoa ireo rehetra mianatra lomano, raha ny fanazavana hatrany. “Tiako ny lomano ary niainako nandritra ny taona maro fa tiako lavitra ny mizara izany fahaizako izany amin’ny hafa”, hoy ny Nambaran-dRasoanjanahary Valisoaniaina. Mi.RazL’article Lomano-MNS Valisoa: olona 6 hampianariny maimaim-poana a été récupéré chez Newsmada.